Chii chinonzi Railway SIL Signaling System? - RayHaber | raillynews
mushaRailwayChii chinonzi Railway SIL Signaling System?
Chii chinonzi Railway SIL Signaling System?
14 / 01 / 2020 Railway, GENERAL, Tsamba yekutanga
Chii chinonzi njanji sil chiratidzo chiratidzo
Saini masisitimu ndiwo masystem anopa unsur chengetedzo olan ayo akakosha kune enjanji masitimu akadai Tram (SIL2-3), Chiedza Metro neMetro (SIL4) nekuita zvinoenderana zvinoenderana nenzira inokurumidza uye yakavimbika nzira. Aya masystem anopa hukuru hukuru hwekuita, manejimendi uye zvakanakira mutengo pamwe nekuchengetedza.
Kunyangwe mashandisiro enzira dzezvitima munyika medu asina kujairika kusvika kuma90, tinoona kuti masitima enjanji ari kuwedzera kusarudzika kugadzirisa dambudziko remigwagwa riri kuwedzera. Ngatipfuurireiwo nechinyorwa nekutsanangura izvo zvinosimbisa mvumo yeiyo nzira dzechitima.
SIL (Dziviriro Yekudzivirira Kuvimbika)
SIL certification inoreva kuvimbika kwehurongwa. Iyo SIL yezinga inoratidzwa mune akakosha mana mazinga, uye sezvo SIL mwero inowedzera, iro rekuchengetedza danho rinowedzera nekunetseka kwegadziriro kuderedza njodzi.
SIF (Kuchengetedzwa Kwakaitwa Basa)
Chinhu chikuru SIF apa ndechekuziva nekudzivirira iyo njodzi mamiriro anogona kuitika panguva yekuita. Ese mabasa eSIF anoumba iyo SIS (Yekuchengetedza Achagadziriswa System). SIS ndiyo yekushandisa iyo inodzora iyo sisitimu yese uye inoita iyo sisitimu yakachengeteka mumamiriro ezvinhu ane njodzi.
Izwi rekuti "Basa Rokuchengetedza iseti rinoreva kuderedzwa kwengozi kune chinogamuchirwa nekushanda mabasa ese eSIF muchirongwa.
Otomatiki Chitima Kumira (ATS)
Kuitira kuti kuve nechokwadi chekuchengetedza uye kwakakodzera kufambisa kwechitima mukufambiswa kwenjanji, kwakasiyana masisitimu ekudzora matangi akagadzirwa uye mamwe acho ndeaya (ATS) otomatiki chitima kumisa, (ATP) otomatiki chitima kudzivirira, (ATC) otomatiki chitima kutonga.
Sisitimu yeATS ndeyokuchengetedza system inoita kuti kumiswe kwechitima nekudzora kumhanya kwechitima kune iyo traffic inodzorwa nemasaini emagetsi uye zvakare kunyevera mutyairi kana zvichidikanwa.
Iyo ATS system inodzora kumhanya kweyezvitima neruzivo rwezvinhu zviri paneboardboard nemagneti anoiswa munzira nezvikwangwani padyo navo.
Dziviriro Yechitima Kudzivirirwa (ATP)
Iyo ATP system ndeye yekudzivirira iyo inopindira panguva iyo mutyairi asingawiri kune zvinofanirwa kumhanya kana kumisa chitima ichienderana neruzivo rwakagamuchirwa kubva kuATS system.
Otomatiki Chitima Kudzora (ATC)
Kunyangwe yakafanana neATS system, inoshandura kumhanya kwechitima zvichienderana nenzvimbo yezvitima kumberi nekumashure. Kusiyana neATS system, kuvhura / kuvhara magonhi uye zvichingodaro. maitiro ekuchengetedza anoteedzerwawo neATC.
Mumakore ekutanga enjanji masisitimu, hapana matanho ekudzivirira aidikanwa nekuda kwekumhanya kwepasi chechitima uye hushoma hwemigwagwa. Amiyane, injiniya wekuchengetedza. Kunyangwe kuchengetedzwa kwakaedzwa kupihwa nekushandisa iyo nguva yekubvumirana nevatapi venhau netsaona dzakasangana, kuchengetedzwa kwakatangwa kupihwa nenzira yekuregedza nzira uye kusayina masystem neyekuwedzera traffic density mune inotevera nzira.
Muchidimbu, nzira yekupindirana kwenguva yakashandiswa mumakore ekutanga enzira dzechitima, uye nzira dzakapfuura dzekufamba dzakashandiswa, iyo inopiwa nemasaini masisitimu. Nhasi, kushandiswa kwemasaini masisitimu kwaita kuti kukwanise kutyaira zvitima zvakangodaro pasina mutyairi.
Iyo yekusaina system inogona kuongororwa muzvikamu zviviri seMunda Zvivakwa (Rail Circuits, otomatiki Shears, Signal Mwenje, Chitima Kutaurirana Zvombo) uye Central Software uye Interlocking.
Zvitima zvechitima (Kudzidziswa kwechitima); Iko kune mana marudzi eIsolated Algebraic Rail Circuits, Coded Rail Circuits, Axle Counter Rail Circuits uye Inofambisa block Rail Circuits.
MuIsolated Algebraic Rail Circuits, kana paine vhoriyamu yekudzoka zvichienderana nemagetsi anoshandiswa kubva kunzvimbo iri kure, hakuna chitima mudunhu rechitima uye kana pasina magetsi ekudzoka, kune chitima. Izvo zvinofungidzirwa kuti pane chitima pano kana pane chero chakundikana.
Coded Rail Circuits inoshandisa iyo frequency, uye nekushanduka kwechiratidzo kunoreva kuti pane chitima pane track. Iko kushandiswa kwehurongwa uhwu mupfupi uye nzvimbo dzisina kuvhiringidzwa zvinobatsira kwazvo maererano nekuchengetedza uye mutengo.
Zvitima zvechitima neAxle Counters masisitimu anopa chengetedzo nekuona kwaanowanikwa nzvimbo yechitima nekuverenga maburi achipinda nekusiya njanji. Kushandiswa kwavo munyika kuri kuwedzera nekukurumidza.
Kufambisa Bhurawu Rail Masekete anoshandisa chaiwo mabhureki ayo akareba zvichienderana nekumhanya kwechitima, kumira chinhambwe, braking simba, curve uye anotsvedza parameter yedunhu.
Kushandisa Kwekunosaina Systems
Munzvimbo dzakapfava uye dzakaona, kutyaira kunoonekwa kunoshandiswa, nepo muchigero uye mumawaki emamaki, iyo nzira yekubatanidza inoshandiswa inoshandiswa kusarudza kupinda uye kubuda kwechitima kune inoenderana switch. Interlocking system ndiyo sisitimu inokiya chero njanji panjanji inodiwa nechitima kuti ipinde uye inotadzisa chitima kupinda.
Nekushandisa kweFully Automatic Driverless Systems, chinhu chevanhu icho chiri chikuru chinhu chengozi chinodzikiswa. Nemasistimu aya, tsaona dzinogona kudzivirirwa nekuona ipapo zvitima, apa nzvimbo dzekumirira dzevapfuuri dzakapfupiswa nekutaura kureba pakati pechitima uye kugadzirwa kunowedzerwa nekushandisika kwakanyanya kushanda. Aya masystem anobatsirawo nemitengo yepasi yekugadzirisa.
Mazuva ano, zviteshi pasi pechitima nepasi pechitima chinonyanya kushandisa Fixed block manual driver, Fixed block automatic driver uye Moving block otomatiki kutyaira masaini system.
Yakagadzirirwa blockbook drive
Kazhinji 10 min. Muchirongwa ichi, icho chinoshandiswa kunzvimbo dziri pasi apa, nzira yakakodzera yechitima ndeye 10 min. Inofungidzirwawo kupedzisa. Panguva ino, zvinogona kukonzera tsaona kana mainjiniya afamba ichi chinhambwe munguva pfupi kupfuura ino nguva. Panguva ino, Mechanic Information Systems (Dis) uye Vehicle Tracking Systems inofanira kushandiswa.
Yakagadzika block otomatiki kutyaira
Kunyangwe iri inenge 20% inodhura kupfuura bhuku rekutyaira rakatsanangurwa pamusoro apa, zvinokwanisika kushandisa mutsetse zvakanyatsonaka nekutyaira kwechitima nechitima chesimba. Sezvo chikamu chebhendi chakatemwa panguva yekugadzira chikamu, avhareji yechitima frequency ndeye 2 min. Inokodzera kushandiswa munzvimbo dzinokwira.
Mune ino sisitimu, iyo inopindirana inofunga kuti chitima chinga mhanyei uye nekunzwa chinzvimbo chechitima nekuudza chitima kusvika chinofanira kumira.
Auto otyaira (inofamba block)
Sezvambotaurwa pamusoro apa, kuti chikamu chepedyo chechitima chiri pedyo sei nechitima chemberi chinoverengerwa uye chinotakurwa kuchitima zvichienderana nekumhanya kwechitima, simba rekumhanya uye mamiriro emugwagwa. Nzvimbo yechitima yega yega inokiyiwa zvakasiyana uye iyo inomhanya yechitima chega chega inoverengwa zvakasiyana. Nekuda kweiyo kuchengetedzeka chikamu, kusaina kunopihwa zvinyoro nyowani kuburikidza nekutaurirana nzira mbiri.
Chii chinonzi Smart Stop System?
Ndeipi chikonzero chekuongorora magetsi?
Chii chinonzi Railway Transportation?
Chii chiri ERTMS / ETCS? - Railway Technologies
Njanji Dunhu ane Axle Counter
Railway SIL Kurinongedzera System
Chii chinonzi Railway SIL Signaling System
Chii chinonzi Railway Signalization System
Coded Rail Circuits
Machinist Ruzivo Systems
Subway signaling system
chifambiso chechitima chekumira
Otomatiki Chitima Kudzora System
Fully otomatiki Driverless Systems
Chitima Kutaurirana Zvishandiso
Ordu Metropolitan Kuvaka Mazuva Ano Migwagwa